Huawei Sound X: naqshadeynta, astaamaha iyo qiimaha uu leeyahay afhayeenkan | Androidsis
Muddo dheer ayaan sugeynay soo saaraha Aasiya inuu soo saaro afkiisa caqli u gaar ah si loola dagaallamo Guriga Google iyo Amazon Echo, oo miisaan culus ku leh waaxda. Si dhakhso leh looma odhan intii la qabtay: Huawei Sound X horeyba waa run, oo ay ku raran yihiin sababo si ay u noqdaan mid ka mid ah xalka ugu fiican suuqa.
Waxaan ka hadleynaa badeecad u taagan inay bixiso naqshad dheer. Kuwa bilawga ah, waxay ka kooban tahay muraayad barta aasaasiga ah ee naqshadeynta mesh-hoose ee ballanqaadeysa dhawaaqa cajiibka ah. Inbadan, markaad aragto muuqaalkeeda oval, waxay udiyaarisay inay bixiso dhawaq 360-degree ah. Oo iska jir, xooggeedu wuxuu kaaga tagi doonaa afkaaga oo furan.
Huawei Sound X wuxuu tilmaamayaa siyaabaha loo noqdo afhayeenka ugu caqliga wanaagsan suuqa
Bilawga, af-hayeenkan caqliga badan wuxuu gudaha ku qariyaa laba 3.5 "subwoofers" ah, oo balan qaadaya 60W awood. Tan tan, ku dar laba woofer oo isku mid ah oo ay weheliyaan lix ku hadla dhexdhexaadka dhexe iyo 8W oo awood kasta ah Guud ahaan, Huawei Sound X cusub ayaa maamusha in la bixiyo dhawaq gaaraya ilaa 93 decibel. Tirada runtii layaab leh, sax?
Haddii aysan ku filnayn, waa inaad ogaataa in soo-saaraha Shiinaha uu la midoobay Devialet. Waxaan ka hadleynaa shirkad Faransiis ah oo xaladeeda dhawaaqa ay tahay mid cajiib ah. Waad ku mahadsan tahay midowgan, Huawei Sound X wuxuu ku raaxeeyaa tiknoolajiyada Push-Push ee soo saaraha Faransiiska. Waxaan ka hadleynaa nidaam iska ilaaliya qaloocda dhawaqa marka mugga la gaadhsiiyo ugu badnaan, taas oo kuu oggolaan doonta inaad af-hayeenkan caqliga badan ku dhawaaqdid qarax adiga oo aan ka walwalin tayada heesaha dhawaaqa leh.
Intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay tiknoolajiyadda 'Huawei Histen', oo ah taageero lagu ogaanayo xaaladda af-hayeenka caqliga leh si loo habeeyo codka soo baxa iyadoo ku xiran hadba meesha ay tahay. Ma dhigtaa jikada? Waxay ku xisaabtami doontaa cabirkeeda. Dabcan, waxay u muuqataa in kaaliyaha codka, ugu yaraan nooca Shiinaha, uu noqon doono mid u gaar ah shirkadda Huawei.
Waqtigan xaadirka ah, waxay gaadhay suuqa Aasiya ee 260 euro si loo beddelo. Waxaan u baahnaan doonnaa inaanu faraha is dul taagno si aan u aragno haddii ay soo bandhigayaan nashqad caalami ah oo Alea ama Kaaliyaha Google ay ku dhex jiraan, maxaa yeelay hadda waa tan Huawei SoundX tilmaam siyaabaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Huawei Sound X, kani waa xifaaltanka cusub ee Amazon Echo iyo Google Home